I-Spocket: Qalisa kwaye ngaphandle komthungo udibanise iShishini lokuLahla kunye neQonga lakho le-Ecommerce | Martech Zone
Njengompapashi womxholo, ukwahlula imithombo yakho yengeniso kubaluleke kakhulu. Apho sasinemithombo yeendaba ephambili kumashumi eminyaka eyadlulayo kwaye intengiso yayinengeniso, namhlanje sinamawaka emithombo yeendaba kunye nabavelisi bomxholo kuyo yonke indawo. Ngaphandle kwamathandabuzo ubabonile abapapashi abasekwe kwintengiso kufuneka behlise abasebenzi kule minyaka idlulileyo… kwaye abo basaphilayo bajonge kwezinye iindawo ukuvelisa ingeniso. Ezi zisenokuba ziinkxaso-mali, ukubhala iincwadi, ukwenza iintetho, ukwenza iindibano zocweyo ezihlawulelwayo, kunye nokuqulunqa izifundo.
Umlambo omnye ongahoywanga uqala ivenkile ye-intanethi kunye neemveliso ezifanelekileyo. Ukuba nepodcast, umzekelo, ehambayo inokuxhaswa ngeminqwazi, i-t-shirts, kunye nezinye izinto ezithengiswayo. Nangona kunjalo, ukuphatha uluhlu lwempahla, ukupakishwa, kunye nokuthumela yintloko ebuhlungu onokuthi awunalo ixesha layo. Kulapho i-dropshipping isisisombululo esifanelekileyo.
Yintoni ukuwisa kwaye kusebenza njani?
Umthengi ufaka iodolo kwivenkile yakho kwaye akuhlawule imali engu-X. Umthengisi (wena) uya kufuna ukuthenga loo mveliso kwi-Y isixa kumthengisi, kwaye baya kuthumela into ngqo kumthengi wakho. Inzuzo yakho ilingana no = X - Y. Imodeli yedrophu ikuvumela ukuba uvule ivenkile ye-intanethi ngaphandle kokuba uphathe naluphi na uluhlu.
I-Spocket: Khangela iiMveliso eziThengiswa kakhulu kuBaboneleli abathembekileyo
Siye Bha liweyo malunga Ukuprinta, umthengisi we-dropshipping kwixesha elidlulileyo, obalaseleyo kwindawo yentengiso. Iprinta inikezela ngesakhono sokwenza ngokwezifiso kunye nokupapasha izisombululo ezinophawu okanye eziyilwe. Spocket yahlukile kuba awunakukwazi ukwenza uphawu okanye ukwenza ngokwezifiso… yindawo yentengiso yeemveliso eziqinisekisiweyo ezisele zithengiswa kakuhle.
Spocket yohlukile kuba ayingomthengisi nje omnye… yingqokelela yamawaka eemveliso ezithengiswa kakhulu ezisuka kubathengisi abathembekileyo, abasemgangathweni. Banendibaniselwano yeemveliso ezivela e-USA, EU nakwihlabathi jikelele, ngoko uya kukwazi ukubhenela kwiimarike ezininzi – kwihlabathi liphela.
Indawo yabo yentengiso ikuvumela ukuba ukhangele kwaye uhlele ngomthombo wokuthumela, isantya sokuthumela, ukuhambisa okungabizi kakhulu, uluhlu lwempahla, ixabiso, ukubaluleka, kunye nodidi:
Iindidi ezihamba phambili zibandakanya iimpahla zabasetyhini, ubucwebe kunye neewotshi, iimpahla zezilwanyana, iibhafu kunye nezixhobo zobuhle, izixhobo zetekhnoloji, iimpahla zasekhaya kunye negadi, abantwana kunye nempahla yabantwana, amathoyizi, izihlangu, izixhobo zepati, kunye nokunye. Iimpawu ziquka:
Iisampuli: Oda kanye kwideshibhodi ngocofa nje okumbalwa. Vavanya iimveliso kunye nababoneleli ngokulula ukwakha ishishini elithembekileyo lokulahla.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza: I-90% yababoneleli beSpcoket bafumaneka e-US naseYurophu.
Yenza Ingeniso Esempilweni: I-Spocket ikunika i-30% - 60% isaphulelo kumaxabiso aqhelekileyo okuthengisa.
I-100% i-Automated Order Processing: Konke okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha lokuphuma, kwaye bayakukhathalela okuseleyo. Baqhuba iiodolo kwaye bazithumele kubathengi bakho.
I-invoyisi eneBrand: Uninzi lwababoneleli kwiSpocket bayakuvumela ukuba wongeze ilogo yakho kunye nenqaku elilungiselelweyo kwi-invoyisi yomthengi wakho.
Inkxaso 24 / 7: Ungathumela umyalezo nangaliphi na ixesha losuku, kwaye sikulungele ukuphendula imibuzo yakho.
I-Spocket ikwanolunye lolona luntu lukhulu lwe-dropshippers ukufunda ukusuka phambili Facebook!
I-Spocket inikezela ngokudityaniswa komthungo kunye BigCommerce, Shopify, Felex, Wix, Ecwid, squarespace, WooCommerce, Isikwere, iAlibaba, iAliScraper, kunye neeVenkile zeKMO.
Ukubhengezwa: Ndililungu le Spocket kwaye ndisebenzisa amakhonkco obulungu kulo lonke eli nqaku.
tags: AlibabaAliScraperBigCommerceukudityaniswa kwe-dropshippingivenkile eyehlayoUkuyeka abathengisiEcwidIqela le-FacebookFelexMerchandiseonline storethengasikweresquaeveraceababoneleliwixwoocommerce